U-Max Fry ungumlingisi oyinhloko uchungechunge lwezincwadi ezithandwayo. Kwaphela isikhathi eside kwaziwa lutho ngomlobi wezincwadi, kodwa ekuqaleni kwawo-2000 umlobi ngokwakhe wazibonakalisa. Noma kunalokho, umlobi. Lesi sihloko sitshela ngemininingwane yakhe yokufunda nokubhala.
USvetlana Martynchik, noma uMax Fry
Isiqephu sombhali ongenakubonakali wezintambo ezintathu ezivelele zamanoveli "Echo Labyrinths", "Echoes Dreams" ne "Echo Chronicles", ezingenalo ubulili futhi zafihla ngaphansi kwegama likaMax Fry, zatholwa kungekudala - ngonyaka wama-2000. Babengabantu ababili - uSvetlana Martynchik, umbhali, no-Igor Stepin, umculi nomyeni wesikhathi esithile, okwakuqala ukuhlanganyela ekubhalweni kweminye imisebenzi.
Igama lesidlaliso sikaM Max livele lapho umqondo uvela ukuthi umlingisi oyinhloko wencwadi kanye nomlobi kufanele abe negama elifanayo. Isibongo sikaFry sihunyushwe ngokuthi "ukhululiwe", "ngaphandle" (kulokhu inhlanganisela ethi "Ngaphandle Kwama Max" itholakala), okuyinto ebonisa ngokucacile umbono womlobi. Umqondo oyithakazelisayo wawuthandwa kakhulu, ngoba wabuthana izilaleli eziningi zezici zobungcweti zaleli duo.
Ngisho nangemva kokudalulwa kwegama langempela uSvetlana uthe "ukuxolisa" okunjalo kwakungeyona uhlobo oluthile lokunyakaza kwezebhizinisi, kodwa isifiso sangaphakathi somuntu siqu, sangaphakathi. Futhi, mhlawumbe, kwakungalungile ukuthi kulolu gama lombhalo kukhona iqiniso elingaphezulu kunamagama wangempela namagama okuqamba, okuyizinto ezisuke zifihla ngemuva kwemaski.
Iminyaka yezingane nentsha
Umculi wesikhathi esizayo, umlobi nomholi wezinhlelo ze-intanethi, u-Ukraine ngokuzalwa kwakhe, wazalwa e-Odessa (ngaleso sikhathi i-USSR) ngo-February 22, 1965, futhi waba nengxenye ebalulekile yobuntwana bakhe eJalimane. Kwenzeke ukuthi, kanye noyise, umculi wezempi owayethunyelwe lapho ukuyokhonza, kwadingeka athuthe kuye.
Imikhumbuzo yaseBerlin, lapho ehlala khona kuze kube yiminyaka engu-9, yaqhubeka ishisa kakhulu. Ngenxa yabantu abanomusa nabahamba phambili, ihlathi elihle elizungeze indlu yabo, uMartynchik Svetlana waqonda ukuthi lo muzi wawulungile. Ngakho-ke, kwakunzima kakhulu ukuhlela futhi ukujwayela ezinye izinto lapho ebuyela e-Odessa. Idolobha langomdabu lama-70 nela-80 lalikhunjulwa njengendawo yokuhlaselwa kwamasiko nezenhlalakahle, ukuphelelwa ithemba, lapho kwakungenakwenzeka ukusebenza ngokuphumelelayo nangokwemvelo.
Izifiso zobuciko zabonakala kuSvetlana esemncane. Futhi babehlukene kakhulu. Intshisekelo yezincwadi yabonakala eqinisweni lokuthi le ntombazane yayingumngcwabo wokujabulisa umndeni wayo kanye nezivakashi ngezinganekwane ezimbi zokwakheka kwayo. Iziqephu wathatha ezincwadini eziningi aziletha emtatsheni wezincwadi futhi wafunda kusukela kusikhubekiso kuze kube sekhava. Ngakho-ke, kwaba nokuhlakanipha ukuthola umsebenzi emtatsheni wezincwadi ngemuva kokuphothula iziqu. Ngesikhathi eseyingane, uSvetlana waqala ukuthakazelisa kakhulu ukuthwebula izithombe. Ngemuva kokuthola ikhamera yakhe yokuqala, eyayisiyisipho kubaba wakhe njengomdala we-Great Patriotic War, wathola ukuthi kungenzeka ukudluliselwa kwezwe. Lokhu kwaba yinto ebonakalayo yokuzibonakalisa ekuziboniseni kwezobuciko.
Imfundo ephakeme uMartynchik Svetlana ayitholanga. Ukuba umfundi we-philological faculty yase-Odessa State University, wamphonsa ngonyaka wesithathu. Ngalesi sikhathi intombazane iqala ukuzibheka njengomculi. Futhi lokhu kukhishwa kwaba khona ngemva kokuzijwayeza ngo-1986 nomakhelwane wakhe wesikhathi esizayo, umngane futhi kamuva umyeni u-Igor Stepin.
USvetlana Martynchik no-Igor Stepin baba yiziqephu ezinhle kakhulu zokudala. Baqala nge-engavamile - ukudala umhlaba we-plastiki, "i-Planet Homan". Le ndlela yokuzilibazisa ivela ebuntwaneni bukaGigor futhi ithathwe yilabo abashadile ukuthi bakwazi ukudala hhayi kuphela abantu abathandayo, izakhiwo, kodwa futhi nesiko labo, ukuchaza umlando, izinkolelo kanye nekhalenda lalabo abalingiswa. Umsebenzi wesikhathi eside uyele izithelo. Kwaqala ukuhanjiswa embukisweni waseMoscow ngaphansi kwesihloko esithi "The People of Ho", ngaleso sikhathi eJalimane nase-United States njengeprojekthi ethi "The World of Homan" futhi, ekugcineni, kuchazwe "IziNests zaseChimeras" nguWax Fry ngokwakhe.
Konke lokhu le mbhangqwana isindisa ngokugcwele indlu yabo, iqhaza emibonisweni eminingi, ithengisa umsebenzi wayo phesheya. Ngo-2004 bathuthela eVilnius, lapho bahlala khona manje. "Inhlekelele ayiyena oyisiphukuphuku, abantu ngeke bachithe imali ngeze," - amazwi kaMax Fry, ochaza kahle kakhulu lokhu kuhlanganiswa okukhiqizayo nomndeni.
Umsebenzi we-Max Fry no-Literary
Ngaphambi kwalokhu kubonakala, u-Max Fry, uSvetlana Martynchik akazange acabange ngomsebenzi womlobi. Kanye nomyeni wakhe, ekwakheni amazwe omlando, bafika indaba kubo, futhi kusihlwa babatshela omunye nomunye. Ngakho-ke, ngo-1995, indaba yadalwa mayelana nokuzijabulisa kukaSir Max e-United Kingdom ngenhloko ebizwa nge-Echo. I-adventures ye-hero futhi yaqala ukuchaza uSvetlana, futhi imisebenzi yakhe iqoqe izimpawu ezinhle ze-parody, i-detective kanye nefantasy.
Kakade unyaka olandelayo, indlu yokushicilela "Azbuka" yaqala ukukhishwa ngokulandelana ngendaba yomlobi uMax Fry womjikelezo othi "Labyrinths of the Echo": "Izindaba ezilula zemilingo", "Ubuhle", "Amavolontiya okuphakade", "The Blind Dead" nabanye. Umlingisi oyinhloko ukhona nasemisebenzini enesihloko esithi "IziNtshonalanga ze-Chimeras", "Ragnarok yami", ezenzeke emhlabeni we-Homan.
Kamuva waba uchungechunge oluthi "Amaphupho Echoes" kanye "IziKronike Zama-Echoes." Yonke le misebenzi yaba yinto ethandwa kakhulu phakathi kwabafundi, futhi isibalo sikaMax Fry esingakaqondakali sasivuselela isithakazelo futhi sikhangele. Kodwa-ke, ukuvezwa kwalokhu kubhala akusekude nokubonakala ngo-2002 kwe-"Encyclopedia of Myths" nethi "Umlando Weqiniso we-Max Fry, uMlobi no-Character" kuwo.
Isizathu salokhu kuvezwa kwakungqubuzana kukaSvetlana Martynchik nomqondisi we-ABC, owayefuna ukwenza igama lomlingisi igama lephawu lokuhweba futhi akhiqize imisebenzi enkulu yabanye ababhali ngaphansi kwakhe. Ukungavumelani nalokhu kwaholela eqinisweni lokuthi izindaba ezilandelayo zikaSvetlana zaqala ukunyatheliswa endlini yokushicilela "Amphora".
Okunye imisebenzi kanye nezici zabo
UMartynchik Svetlana, ngemuva kokuthuthela endlini yokushicilela "i-Amphora" uye wenza ukukhanya kwemibhalo ngaphezu kwezincwadi ezingu-20, kuhlanganise ne "Coffee Book", "Book Tea", "IziNdaba ZaseRashiya Zangaphandle." Kanye nemisebenzi yangaphambilini, bayakwazi ukuba izindaba ezizimele, lapho umfundi angaqala khona ukujwayela. Ukuhlanganiswa kwezikhombandlela nezinhlobo ezahlukene - amanoveli, ama-heroic, umdlalo we-postmodern, izindaba ezihlekisayo kanye nezengqondo - konke lokhu kuhlanganisa nesibindi sezenzo zomlingisi ngokukhululeka nokunciphisa kwesethulo.
USvetlana ungumbhali weminye imisebenzi, efana ne-"The Novel Ideal" (1999), "Book of Solitude", "Izindabakwane" (2004). Kungakhathaliseki ukuthi babekuphi - ngabanye noma ngokubhaliwe, lo wesifazane akazange abe nomsebenzi wabo kuphela. Lokhu kusebenza kuMax Fry - uyibheka njengomphumela womsebenzi ovamile no-Igor Stepin, ongazange abe nengxenye kuphela ekuboniseni izincwadi, kodwa futhi wabonakala noSvetlana njengomkopishi.
UMartynchik Svetlana unobuntu obuhlukahlukene. Ngemuva kwalokho, wakwazi ukuba umlobi, umlobi we-prose, umgcini wechungechunge lwezincwadi endlini yokushicilela, ehola umsakazo, umculi nomthwebuli wezithombe. Phakathi nalesi sikhathi, wathola imiklomelo eminingana, njengomklomelo womagazini othi "The World of Fiction" we "Chronicles of Echo" (2005), ekuphakanyisweni komfanekiso wesilisa omuhle owutholile "Umnsalo wesiliva" ngo-2008.
Uqobo ngokwayo luchaza, oluthinta uhlobo (kokubili izitshalo, nezilwane), uhambo oluhamba emadolobheni omhlaba kanye nezicathulo ezinhle.
USvetlana Martynchik uqobo lwakhe, umlando wakhe nomsebenzi wakhe waba yinto ehlukile yokuzibandakanya, okwenza indaba engacabangi kodwa ethakazelisayo neyingqayizivele ethatha inani elikhulayo labafundi.
Larch European - nomele eliqhakazile engavamile flora coniferous